Coral Reef: အိုဘယ့် ယောဂီ
ပြုံးပန်း said on October 17, 2014 at 5:45 AM
Well Done , Zune!
Anonymous said on October 17, 2014 at 7:50 AM
ယောဂီ၏ စာလုံးစီနေသော စာပိုဒ်တွင် မပြုံးပဲ မနေနိုင်အောင် ဖြစ်မိသည်
တနေ့က စာလာဖတ်သွားသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်
Ma Tint said on October 17, 2014 at 7:50 AM
သံသရာအတွက် မပုပ်မသိုးရိက္ခာ အချိန်မလင့်ခင့် တတ်စွမ်းသလောက် စုဆောင်းသင့်တယ် ဇွန်လေးရေ။ တီတင့်ရောက်ဘူးပေမယ့် တရားစခန်းမ၀င်ဖြစ်ဘူး။ ရွှေမြင့်မိုရ် မိုးကုတ်ဝိပဿနာမှာတော့ အဆင်ပြေရင် ပြေသလိုဝင်ဖြစ်တယ်။
မဒမ်ကိုး said on October 17, 2014 at 7:58 AM
မဇွန်ကိုပျောက်နေပါတယ်လို့ မမယ်သံနဲ့ပြောနေသေးတာ ။ ခုလိုငြိမ်းချမ်းနေတာ ကောင်းလိုက်တာ ညီမလဲ ပြန်ရင် ရိပ်သာ တပတ်လောက်ဝင်ချင်တယ် လိပ်စာလေးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုပြောပြပါလားမရေ
ဆွေလေးမွန် said on October 17, 2014 at 10:13 AM
အားကျလိုက်ပါဘိ။ အဲဒီလို အေးအေးချမ်းချမ်း တရားစခန်းဝင်ချင်လိုက်တာ.
စံပယ်ချို said on October 18, 2014 at 12:23 PM
မတွေ့တာကြာပြီနော် လင့်တွေပျက်လို့ပြန်ချိပ်နေရလို့လေ စိတ်ဝင်စားစရာတရားစခန်းလေးကြောင့်အမကိုယ်တိုတောင်သွားကြည့်ချင်မိတယ်
ဇွန်မိုးစက် said on October 18, 2014 at 6:36 PM
Thank you, ama Pyone. :)
ယောဂီရဲ့စာလေး လာဖတ်ပေးတဲ့အတွက်လည်း အနောနီးမတ်စ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။း)
အဟုတ်ပါပဲ တီတင့်ရေ၊ အသေးမဦးခင် တရားအရင်ဦးအောင် ကြိုးစားဖို့ ဇွန်တို့အမြဲသတိကပ်နေရမှာ။
ညီမကိုး... လိပ်စာကတော့ အင်းတကော်ဖားအောက်တောရရိပ်သာလို့ပဲ မဇွန် သိထားတယ်။ ညီမ၀င်ချင်တယ်ဆိုရင် ရိပ်သာကို ဖုန်းဆက်ပြီးကြိုတင် အကြောင်းကြားဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်။ ဆက်သွယ်ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ် ဖဘကနေ မက်ဆေ့ခ်ျပို့ပေးမယ်နော်။း)
တရားစခန်းဝင်ရတဲ့အခိုက်က အေးချမ်းမှုတွေ ပေးစွမ်းနိုင်တာ အသေအချာပါပဲ မဆွေလေးမွန်။ စာလာဖတ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်တယ်နော်။း)
ဟုတ်တယ် မဂျက်ရေ၊ ဇွန်လည်း အမဆီကို မရောက်ဖြစ်သေးဘူး။ ဒီတစ်ရက်နှစ်ရက်တော့ သေချာပေါက် လာခဲ့မယ်။း) မဂျက် စိတ်ဝင်စားရင် ရိပ်သာကို ဆက်သွယ်ဖို့ ဇွန် ဖုန်းနံပါတ် ပေးမယ်လေ။